Tag: form tool | Martech Zone
Tag: fitaovana fananganana
Ny fanakorontanana amin'ny automatisation marketing
Alatsinainy Martsa 10, 2014 Alatsinainy Martsa 10, 2014 Douglas Karr
Raha vao nanoratra momba ny taloha sy ny ankehitriny ary ny ho avin'ny marketing aho, sehatra iray ifantohana dia ny automatisation marketing. Niresaka momba ny tena fizarazarana ny indostria aho. Misy ny vahaolana farany ambany izay mitaky anao hampifanaraka ny fizotrany mba hahomby. Tsy lafo ireo… vola be an'arivony dolara isam-bolana ary mitaky anao hamerenana amin'ny laoniny ny fomba fiasan'ny orinasanao hampifanaraka ny fomba fiasa. Mino aho fa mitera-doza ho an'ny maro izany